के दिपकविना दीपाले केही गर्नै नसक्ने नै हुन त ? के भन्छिन दीपा ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentके दिपकविना दीपाले केही गर्नै नसक्ने नै हुन त ? के भन्छिन दीपा ? (भिडियो)
March 21, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
यतिबेलाका चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेट्न नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित कलाकारहरु मन्त्री पण्डितलाई भेट्न उनको क्वार्टरसम्म पुगेका छन् । नेपाली चलचित्रका चर्चित कलाकार दिपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, माग्ने बुढा, जितु नेपाल, बर्षा राउत सञ्जोग कोइराला लगायत कलाकार मन्त्री क्वार्टर अगाँडी पुगेका थिए । मन्त्री पण्डितको क्वार्टरमा पुगेका दिपाश्री र दिपकले ‘छक्कापञ्जा’को कथादेखि ‘शत्रु गते’ सम्मकोबारेमा बोलेका थिए । अभिनेता दिपकराजले दिपाश्रीलाई पहिले निर्देशक ल्याउन डर लागे पनि पछिल्लो समय दिपाको काम निकै राम्रो भएको बताए । उनले दिपाश्रीविना चलचित्रको काम गर्न असम्भब हुने पनि बताए ।
त्यस्तै, अभिनेत्री निरौलाले दिपकविना दिपाले केही गर्न सक्तैन भन्ने कुरा महिलालाई हेप्ने प्रवृति मात्रै भएको बताईन् । उनीहरु दुबैजनाले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘शत्रु गते’ हाँस्य चलचित्र मात्रै नभएर पारिवारिक र शन्देशमुलक चलचित्र भएको बताए । त्यस्तै रियल लाईफमै जोडी बाँधिने तयारीमा रहेका अभिनेत्री बर्षा राउत र अभिनेता सञ्जोग कोइरालालाई मन्त्री पण्डितकी पन्तीले अग्रिम शुभकामना भन्दै माला समेत लगाईदिईन् । त्यस्तै, कलाकार निर्मल शर्माले मन्त्री पण्डितसँग भएको आफ्नो असहमतिबारे समेत प्रष्ट पारेका थिए ।